अमेरिकाले ५ करोड खर्च गरि चार्टर गरेर यी ५ नेपालीलाई काठमाण्डौमा ल्याएर छोड्यो ! – " सुलभ खबर "
अमेरिकाले ५ करोड खर्च गरि चार्टर गरेर यी ५ नेपालीलाई काठमाण्डौमा ल्याएर छोड्यो !
काठमाडौं । अमेरिका पुगेर आफ्नो उज्जवल भविष्य बनाउँला भनेर विमान चढेर अमेरिका लागेकाहरु २६ महिना पछि नेपाल फर्कदा आफ्नो लुगा समेत राख्ने झोला नपाएर बोरा बोकेर फर्कनु पर्दा कस्तो पीडा भयो होला । २६ महिनासम्म अमेरिकामा भोगेका पीडा त झन सुनाईसाध्य छैन । पीडा सुन्नेहरुले भन्नेछन् आह धन्य ज्यान बचाएर आएछन् । अमेरिकावाट आफ्नो ज्यानमात्र बचाएर फर्किएका ति युवाहरुलाई अब नेपालमा अर्को समस्या छ । अब घर गएर के जवाफ दिने ?
रुकुममा २९ वर्षीय सुमन (नाम परिवर्तित) ले भोगेको समस्या हो यो । गाउँमै वेरोजगार बसेका उनलाई कसैले अमेरिकाको सपना देखायो । गाउँमा सबैले बेरोजगार भनेर हेला गर्न थालेपछि अमेरिका पुगेर पिआर लिएर तिनै गाउँलेलाई देखाउने भनेर उनी त्यता लागेका थिए । उनको सम्पर्कमा आएका ब्यक्तिले जसरी पनि अमेरिका टेकाइदिने जिम्मा लिए तर मेक्सिकोमा पुगेपछि भने त्यसपछिको जिम्मेवारी आफ्नै हुने सर्तमा उनी त्यता हानिए ।
दोस्रो, कम्तिमा पनि २० लाख रुपैयाँ हातमै दिनुपर्ने र बाटोमा अरु पनि आवश्यक पर्ने बताएपछि उनी त्यसै अनुसार रकम जुटाएर अमेरिका हानिए । अमेरिका जान भनेर १० असोज २०७४ मा काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे ।
एजेन्टले भारत हुँदै यात्रा अघि बढ्ने जनाएका थिए । दिल्लीमा केही दिनको बसाइपछि ब्राजिल हुँदै कोलम्बियाबाट सुरेन्द्रको अवैध अमेरिका तिर लागे । विचौलियाले देखाइदिएको रुटअनुसार उनी डेरियन ग्याप नामक जंगलको बाटो हुँदै हिड्दै गरे । जंगलको बाटोमा हिड्दा उनी र उनका साथी लुटिए । लगाएको लुगा पनि लुटिएपछि मागेर लुगा लगाए । यात्राको क्रममा कपडासमेत मागेर लगाए, निकारगुवाबाट हुण्डुरस, गोटेमाला हुँदै चार महिनाको यात्रापछि उनी मेक्सिको पुगे ।
सीमा क्षेत्रमा बसिरहेका उनी अनुकुल वातावरण मिलेपछि राति सीमा पर्खाल पार गरे, तर अमेरिकी भूमिमा टेकेको पाँच मिनेट हुन नपाइ पक्राउ परे । त्यसपछि ११ महिनासम्म हिरासतमा बसे । विभिन्न शहरका क्याम्पमा सर्दासर्दै बुधबार नेपाल आइपुगे । रुकुमका सुरेन्द्र मात्र होइन, दाङ घोराहीका ३२ वर्षीय दिनेश, बाग्लुङको धाम्जाका ३० वर्षीय हरि र दाङका २९ वर्षीय अनिलको कथा पनि उस्तै छ । अमेरिकाले चार्टर गरेर पठाएको विमानवाट काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लिएका उनीहरुको खल्ती खाली थियो भने हातमा बोरा । बोरामा एक जोर लुगा थिए । अब घर सम्म जाने पनि पैसा थिएन उनीहरुसंग । अ
सपनाको देशबाट खाली हात फर्किएका उनीहरु निराशाका बीच ठट्टा गर्छन् । हुन पनि अमेरिकाले ५ नेपाली युवासहित तीन पाकिस्तानीलाई निष्कासन गर्दा नेपाली ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विशेष प्रकृतिको १६ जना अटाउने विमानमा अमेरिकी सुरक्षा अधिकृतले उनीहरुलाई नेपाल ल्याएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस : अमेरिकाले कामदार भिसा पनि डीभी जसैगरी खुलाउँदै, यस्तो छ जाने प्रक्रिया
अमेरिकी सरकारले कामदार भिसाको आवेदन डीभी लोटरी जसैगरि भर्न मिल्ने भएको छ । कामदारका लागि अमेरिकाले डीभी लोटरी जस्तै आवेदन लिएर भिसा दिने भएको हो । अमेरिकी सरकारले एचवानबीका लागि पनि अब डिभी लोटरीजस्तै विद्युतीय रुपमा दर्ता गरेर श्रमिक लिने भएको छ ।आवेदन आगामी मार्च १ देखि खुल्नेछ भने मार्च २० सम्म भर्न पाइने छ ।
एचवानबीमा दर्ता भएका श्रमिकको आवेदनहरुलाई लोटरीको माध्यमबाट छनोट गरिने छ । त्यसपछि छानिएका आवेदनहरुमध्येबाट थप अन्य प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ ।श्रमिकले भने भिसाका लागि भने रोजगारदाता कम्पनी खोजेर आवेदन दिनुपर्ने भएको छ । आवेदनबाट छनौटमा परेका श्रमिकले भने अमेरिकी रोजगारदाता कम्पनीमा सिधै सम्पर्क गर्ने सकिने जनाइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : नेपाली चिकित्सक ज्ञवालीले पाए ५० हजार डलरको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
ग्लोबल अंकोलोजीष्ट युवा अनुसन्धानकर्ता अवार्डबाट डा. विशाल ज्ञवाली सम्मानित भएका छन्। उनलाई अमेरिकी सोसाइटी अफ क्लिनिकल अंकोलोजी (एएससीओ) ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो। उनले आफ्नो अनुसन्धान सञ्चालनको लागि ५० हजार डलर प्राप्त गर्ने छन्।उनलाई प्रयोगात्मक विज्ञान अन्तर्गत ग्लोबल अंकोलोजीष्ट युवा अनुसन्धानकर्ता (वाईआईए) अवार्ड दिइएको हो। हाल, उनी दक्षिणी अन्टारियोको क्यान्सर केन्द्रको अंकोलोजी विभागमा क्यान्सर विज्ञ र क्वीन्स युनिभर्सिटीमा सहायक प्राध्यापकको रुपमा काम गरिरहेका छन्।
वाईआईएले प्रारम्भिक क्यारियरका अनुसन्धानकर्ताहरूलाई ग्लोबल अंकोलोजीमा गुणस्तरीय अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ।ज्ञवालीले न्युन आय भएका देशमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेहरुलाई आधारभूत किमोथेरापीको तालिमको विषयमा आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेका थिए। उनको यही प्रस्तालाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। जसले ग्रामीण भेगका बिरामीहरूलाई घरको नजिक उपचारको सुविधा दिनेछ। उनले यो काम आफ्नै देश नेपालमा सुरु गर्ने छन्।
डा.ज्ञवाली भन्छन्, ‘देशका ग्रामीण भेगका बिरामीहरूले उपचारका लागि राजधानीसम्म पुग्नुपर्छ, तर यदि हामी केमोथेरापी बिरामीमा आधारित प्राथमिक उपचार गर्ने चिकित्सकहरूलाई तालिम दिन सक्दछौं भने उनीहरुले घर नजिकै हेरचाह पाउने छन्।’२०२० को अन्त्यसम्म उनले आफुले तयार पारेको प्रस्तावना लागू गरी सक्नु पर्नेछ। डा.ज्ञवाली भन्छन्, हामीले पाठ्यक्रमको विकास र केही प्राथमिक हेरचाह गर्ने चिकित्सकहरुको अगुवाई गरी काम सुरु गर्नेछौं।’
काठमाडौं। नेपालमा बुधबार थप २८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना संक्रमित मृतकको
बेपत्ता भनिएका डीएसपी युवतीसहित होटलबाट समातिए
कैलाली- बेपत्ता भएका भनिएका कैलालीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी एक होटलमा युवतीसँगै भेटिएका छन्
एजेन्सी– संयुक्तराज्य अमेरिकाले पहिलो चरणमा ६४ लाख जनालाई कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ
काठमाण्डाै – सुनको भाउ तोलामा एक हजार रुपैयाँ घटेको छ । तोलामा एक हजार रुपैयाँ
काठमाण्डौ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन सयभन्दा धेरै कर्मचारीको सरुवा भएको छ । प्राधिकरणका तह
एलन मस्क बने विश्वकै दोश्रो धनी, बिल गेट्सलाई उछिने
काठमडौं- एलन मस्क संसारकै दोस्रो धनी बन्न सफल भएका छन् । संसारकै धनाढ्यहरूको सूचीमा बिल